Ny undesired - Part 21 | Apg29
Ny undesired - Part 21
Ny tantara mampihetsi-po foana sy ny ahy ho toy ny zazalahy kely tsy ilaina.
Ny rahalahy Foster Stig efa voamarina ao amin'ny fiangonana Annerstads efa-taona talohan'izay. Tsy hotsarovako ny fandraisana ho mpikambana, fa izaho koa te hanamarina ahy. Ny antony Stig nanamafy tena tsy fantatro fa tiako ho raisina ho mpikambana, fa tsy haka ny sasany mety ho fanomezam-pahasoavana, nefa izany fotsiny noho ny tena liana teo amin'ny anjara.
Rehefa manao jery todika ny fiainako aho, dia hahatakatra fa ny mahaliana dia ny fandraisana ho mpikambana noho ny manao ny marina sy fikarohana lalina an'Andriamanitra. Nisy horavàna tao am-poko.
Ny fandraisana ho mpikambana fampianarana nalamin'i Annerstads fiangonana izay natao ny mpitandrina. Fampianarana tao amin'ny efitra iray tao amin'ny rihana faharoa ao amin'ny paroasy trano. Angamba izahay tanora 20 ao na ankizilahy sy ankizivavy izay mamaky.
Nefa hitako fa ny fandraisana ho mpikambana ny lesona dia sarotra sy mafy. Izahay efa namaky mafy avy amin'ny boky momba ny finoana kristianina izay tsy mahalala na inona na inona ny. Tsaroako na inona na inona amin'izao fotoana izao inona ary nampianarina antsika katekista. Angamba aho tsy mahatsiaro izany na amin'ny fandraisana ho mpikambana daty, dia ny andro mialoha ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany.
Ny fandraisana ho mpikambana araka izany fa tsy afaka manova na fiantraikany ahy ho toy ny olona. Aho mbola ny taloha ihany Chris. Izany no noporofoin'ny zava-nitranga iray talohan'ny izahay mba hankanesany eny an-piangonana ka hanamarina antsika. Ary ny mpisorona sy ny katekista rehetra efa nivory tao amin'ny efitra kely alohan'ny fandraisana ho mpikambana.
Rehefa tokony handeha any amin'ny trano fidiovana, izay nataoko. Rehefa niverina aho, dia ny famafazana rano ny chemise fotsy, katekista rehetra fisotroana, nony efa nanasa tanana. Nisy olona nanamarika izany avy, fa noheveriko fa efa nikatona izany rehefa Pee, ka napetrany tao anatin'ny mafy tsara expletive eo anatrehan'ny mpisorona sy ny katekista. Ny mpanompo ratsy nanipika ny teny voafidy, ary Gaga aho pionröd ny tavako. Fa rehefa niditra tao an-fiangonana sy ny Fandraisana ho Mpikambana nandeha eny tsy misy fahoriana.
Rehefa niditra tao am-piangonana aho, ary tamim-pireharehana aho naninjitra nihazona ny Baiboly sy ny boky hira. Inona anefa no nolazaina nandritra ny fandraisana ho mpikambana, dia tsy hevitra.
Heveriko fa ny tena liana amin'ny fandraisana ho mpikambana dia hoe Andriamanitra nitady Ahy. Izany dia fanehoana koa ny ahy fa nitady an'Andriamanitra amin'ny tanora. Fa Tsy fantatro mihitsy fa dia Andriamanitra.
Rehefa manao jery todika ny fiainako aho, dia hahita zava-mitranga hafa, rehefa nitady ahy Andriamanitra. Mety ho toa kely zava-nitranga, izay efa nolazaiko anareo momba ny indenna boky, fa nisy fisehoan-javatra sasany izay Nanjelanjelatra tampoka fa misy Andriamanitra, ary izy nahita ahy.
Tatỳ aoriana, dia tonga saina aho fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tahaka Dadabe Noely, izay nandrahona tsy mba manome fanomezana, raha tsy nisy tsara fanahy, fa ny Andriamanitra tsy hay lazaina, izay nanana fitiavana ny olona kely. Io Andriamanitra be fitiavana nanome fotoana ny fotoana, ary hahatsapa kely tsy azo antoka mampijaly tsotra zazalahy, nefa tsy fantatro hoe iza izany fa nandondòna tao am-po ny tanora ny varavarana
Aho taona maromaro tatỳ aoriana fa ny mpisorona efa nandrara aloha efa ho frikyrkopastor. Dia tokony ho nahalala ny fomba hovonjena sy ny kristianina, nefa tsy nilaza izany ho antsika. Ahoana raha efa nanao izany. Dia mety efa voavonjy, ary nahazo ny fiainako rehetra miova. Be ny fanaintainan'ny sy ny fahoriana dia nosorohina teo amin'ny fiainako. Marina aloha fa efa naka teny ny andinin-mahagaga Jaona 3 sy 16 ny biblars handrakotra. Ny lahatsoratry ny andininy dia:
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, fa na iza na iza mino Azy dia tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay."
Fa efa naka teny izay andininy ao amin'ny Baiboly aho, dia nahita hatramin'ny taona maromaro tatỳ aoriana, ary tsy nilaza na nanazava ny andininy ho antsika. Ny fandraisana ho mpikambana dia toy izany no tsy hahavonjy ahy.
Nandritra ny mbola kely, dia mety indraindray ny alalan 'ny hahatakaranao an-pito ho fampahatsiahivana' Andriamanitra. Tsy azoko ary no izy, fa fony aho taona maro taty aoriana ary afaka amin'ny jery todika ny jery todika ny fiainako aho, dia afaka hahita izany mazava tsara.
Zavatra toy izany afaka mandeha mivantana ao am-po ahy ireo afisy amin'ny nsturmotiv tsara. , Ohatra, ny masoandro ambadiky ny hazo. Ary izay andininy azo. Afaka ho tonga aho indraindray manerana peta-drindrina toy izany, ohatra, ao amin'ny paroasy efitrano. Rehefa namaky ny andinin azy, Gaga aho inona no hery misy azony. Izy ireo ka velona, ​​ary afaka miteny marina tao am-poko. Fa tsarovy tsara aho indray mandeha ny fomba gaga sy talanjona nijery ny peta-drindrina. Ary imbetsaka sady tamin'ny fotoana samihafa izay niteny tamiko Andriamanitra ka nanao ny tenany fantatra amin'ny fomba isan-karazany ireo. Fa Tsy fantatro mihitsy fa izy mandra-taona maro tatỳ aoriana.
Ingrid Ljunggren nanana lisitra-pampianarana tsara indrindra lesona. Matetika, dia nilaza tamiko mikasika ny zavatra tena fantany. Tena mora ny mihaino azy ary handray ny zavatra hoy izy ka nampianatra.
Nisy fotoana teo amin'ny fivavahana izaho tsy hanadino. Tsy fantatro raha Kristianina izy, nefa nilaza tamiko fa izy sy ny vadiny efa nodi-zaza vao teraka narary ary nampidirina hopitaly. Avy eo izy ireo nivavaka tamin'Andriamanitra ho an'ny zanany izay tena tsara. Dia nahazo valim-bavaka. Izany dia nilaza ny kilasy rehetra. Dia nipetraka tamim-pahanginana, ary nihaino talanjona eo amin'ny latabatra.
Ny sekoly dia tafiditra fa prya izahay indraindray isaky ny enim-bolana amin'ny toerana samy hafa mba hahazoana topimaso ny tontolon'ny asa ary angamba hahazo Hum ny zavatra isika maka ny kilasy fahasivy, izay mazava ho azy fa efa tena sarotra ny mahafantatra. Koa satria aho indray mandeha aho liana zavakanto prya trano fivarotana Tempo in Ljungby ho decorator. Nanana ny mpanaingo ny mpiasa izay nanao ny famantarana. Indrisy anefa, Tiako izany tsy dia tsara ary izany dia sarotra ny haka dingana voalohany. Ary angamba noho ny tsotra sy ny fomba tsy azo antoka.
Noho ny famandrihana sy ny zavakanto dia liana amin'ny resaka hafa enim-bolana izay aho haka prya herinandro amin'ny fitsapana tsipika amin'ny kristianina tany Helsingborg oniversite. Psyokonsulenten nahavita hahazo ahy any, isan-kerinandro. Tsaroako Tsy maintsy mitaingina ny fiara fitateram-bahoaka nidina ho any Helsingborg, Nefa Izaho no manahy ny lavitra, fa nisy tsara, ary avy eo dia tonga ny mpampianatra avy amin'ny sekoly, ary naka ahy. Aho, nipetraka tao an-trano niaraka tamin'ny fianakaviany.
Azoko fa Kristianina izy ireo, nefa tsy fantatro: Inona izany. Ary na dia nanazava na inona na inona momba izany ho ahy.
Ny hariva amin'ny oniversite, dia teo amin'ny vondrona ny mpianatra ary nijery ny sasany mpilalao baolina kitra. Rehefa nanontany ny iray tamin'izy ireo, raha tsy noho io sekoly no Kristianina. Dia nanana ela fampirantiana azy izay dia nanazava ny lasa ny Kristianina. Aho tao amin'ny tontolo kristiana, fa tsy nahare na inona na inona momba an'i Jesosy. Dia akaiky nefa dia lavitra ...
Ao an-trano ao an-trano ny Foster, dia hitako kely Gideona fotsy tucked Baiboly izay tao an-bookcase ao an-trano izy. Tsy fantatro izay efa nandray izany. Angamba dia ny rahalahy Foster. Tsy afaka mahatsiaro fa izany ahy. Angamba ny rahalahiko nahazo izany rehefa nizara Baiboly godeonierna New Testament tao amin'ny sekoly iray kilasy izay efa lasa. Gidroniter efa nantsoina ho amin'ny fampitana avy ao amin'ny Baiboly any an-tsekoly snmst sy ny trano fandraisam-bahiny sy ny efitra am-ponja. Dia efa naka ny anarana aorian'i Gideona ao amin'ny Testamenta Taloha.
Izaho no efa nametraka tao amin'ny mainty ambony seza tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny noho ny mamaky. Toy izany koa ny fandriana izay nipetraka teo an-toerana rehefa gazety nanana tantara momba ahy sy ny tantara an-tsary, taona vitsivitsy talohan'izay.
Nanomboka namaky ny filazantsara ao amin'ny Matio ary efa andeha tsofina lasa izay novakiko. Tena fientanam-po izany! Tsy hijanona.
I mamaky momba an'i Jesosy sy ny fomba Nohomboana tamin'ny hazo fijaliana izy ary Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ny hetsika rehetra dia nohosorany loko mainty miavaka ny tao an-tsaiko, ary tena afaka hahita izany.
Olona ny teny velona toy ny mamaky. Nihaona izy ireo tsara tao am-poko. Tsy tantara fotsiny tsotra.
Manaraka ny serial ny undesired